nyefee music si iPhone ka iPhone
Ọ bụrụ na ị zụta a ọhụrụ iPhone ma na-achọ nyefee gị music collection ọhụrụ gị na ekwentị, adịghị adabere na iTunes naanị ya. E nwere ndị ọzọ mfe ụzọ na-aga banyere ebufe media na songs si gị ochie iPhone ọhụrụ gị otu - ya niile na-adabere otú ị chọrọ ka nyefe.
N'eziokwu, iTunes bụ ewu ewu n'ụzọ na ọtụtụ ọrụ anya na ma karịrị nke ahụ, e nwere iCloud,-awụ ọsọ n'ugwu Go na ọtụtụ ndị ọzọ software na-ọtụtụ ugboro anya. Ka anyị hụ ndị ụzọ ise site na nke i nwere ike nyefee songs site na iPhone ọzọ iPhone.
Part1: Nyefee songs si iPhone ka iPhone iji iTunes
Part2: Nyefee songs si iPhone ka iPhone iji iCloud
Part3: Nyefee songs si iPhone ka iPhone iji TunesGo (ike)
Part4: Nyefee songs si iPhone ka iPhone iji MobileTrans (mfe)
Kasị ọrụ na-eji usoro a, ikekwe n'ihi na ọ bụ onye na-Apple na-atụ aro. Ị nwere ike mfe nyefee songs si gị ochie iPhone ọhụrụ iPhone na-esonụ mfe usoro.
a. Mbụ, jikọọ gị ma iPhone gị na kọmputa na ẹkedori iTunes.
b. Ugbu a gaa menu ebe ị pụrụ ịhụ ma gị na ngwaọrụ. Gaa na ngwaọrụ na nwere ihe niile ị songs. Tinye ya Ọbá akwụkwọ na họrọ niile songs.
c. Ugbu a igosi Dọrọ na dobe usoro nke ọzọ iPhone ngwaọrụ. Mgbe ị na-akpali ndị faịlụ n'elu ngwaọrụ, ọbá akwụkwọ nke ọ na-akpaghị aka ogosiri dị nnọọ dobe na ya.
Iji nyefee music si iCloud, ị ga-achọ ihe Apple ID-eji na gị ochie ekwentị. Otú ọ dị, tupu ị na-eso nzọụkwụ ndị a unu na-eme n'aka na music esesịn e synched ka iCloud. Na ọhụrụ gị na ekwentị itinye otu Apple ID na-eso n'okpuru nzọụkwụ:
a. Gaa na Ntọala na mgbe ahụ ka iCloud. Họrọ music, dị ka ị chọrọ ibudata ya.
b. Ugbu a gaa iTunes akara ma họrọ update taabụ. Ugbu a gaa zụrụ taabụ na-abanye na zụrụ music ngalaba.
c. Ugbu a, ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ ka mmekọrịta ọhụrụ gị iPhone. Enweta na ígwé ojii na akara ngosi ibudata niile music.
ICloud enye gị ohere download niile music iji otu Apple ID.
Chọpụta na download, nyefee ma jikwaa, òkè na-egwu egwu gị na TunesGo. Na-eme ka gị music enweghị ngwaọrụ mmachi n'etiti iOS / gam akporo ngwaọrụ, iPod na iTunes / PC / Mac.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọpụtara ihe mfe ụzọ nyefee music karịa ụzọ abụọ n'elu? Wondershare Dabara ego na nwere otu nke mfe ụzọ nyefee gị songs ọhụrụ gị iPhone. Ị nwere ike ibudata software si ukara website na ala.
Wondershare Nwere ike ijikwa niile gị mgbasa ozi ọdịnaya na ekwentị gị. Ebe a bụ otú i nwere ike nyefee music si iphone ka iphone iji Wondershare TunesGo.
a. Ẹkedori-awụ ọsọ n'ugwu-aga na jikọọ na gị ochie na ekwentị na ugbu a gaa "Iji iTunes" idetuo niile songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Wondershare TunesGo ga-akpaghị aka iyo songs na playlist.
b. Ugbu a jikọọ ọhụrụ gị iPhone na relaunch software. Ugbu a, gaa na nhọrọ 'Import' ma họrọ 'Import si iTunes'. Nke a ga-mekọrịta gị songs na ekwentị gị ma ọ bụ i nwere ike iji iTunes nyefee songs gị iPhones.
Onye-click ekwentị transfer ngwá ọrụ na-ahapụ gị detuo kọntaktị, SMS, photos, music na ndị ọzọ n'etiti Android, Symbian na iOS ngwaọrụ, na nkwado ndabere na weghachite ekwentị data effortlessly.
Otú nyefee songs si iPhone ka iPhone mfe
Wondershare Awade ọzọ software na ike bara uru nakwa - Wondershare Mobile Trans. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kasị mma nyefee unu niile data si ochie ọhụrụ ekwentị. Software ike ịnyefe data ọ bụla na ekwentị na na ọ bụla nyiwe. E nwere ma ikpe na adịchaghị mbipute a software na ukara saịtị. Ọ bụ maka ma Mac na Windows paltforms.
Step1: Mwepụta Mobile Trans na kọmputa gị ma họrọ nhọrọ na-acha anụnụ anụnụ na ekwentị na ekwentị nyefe.
Step2: Ugbu a, ọ ga-arịọ gị jikọọ na ngwaọrụ gị. Jikọọ ma ekwentị na kọmputa na iji eriri. Ozugbo ma ndị ngwaọrụ na-ahụrụ Chọpụta gị ochie ekwentị bụ isi iyi na ọhụrụ ekwentị bụ ebe.
Step3: Ugbu a gaa n'etiti òkè ma họrọ ọdịnaya music. I nwekwara ike na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke music faịlụ na ị ngwaọrụ.
Step4: Next, niile i nwere ime bụ "Malite Iṅomi". Nke a ga-amalite nyefe usoro na gị.
Oge iwere na nyefe na-adabere na size nke data. Otú ọ dị, jide n'aka na ị adịghị ichegbu njikọ.
Edi kûfre usoro ị na-eji, iTunes bụ ndị kasị ewu ewu na tụkwasịrị obi usoro nke-ebufe data. Otú ọ dị, ị nwere ike mgbe niile dochie anya nke a ole na ole pụrụ ịdabere na software. Ha na-adịghị dị ka ewu ewu dị ka iTunes ma ọ ọrụ n'ihi na ị na mgbe ụfọdụ nnọọ mma karịa iTunes.
Awụ ọsọ n'ugwu Go ike ga-eji nyefee unu niile music. Otú ọ dị, software bụ karịrị nnọọ media nyefe. Ọ nwere ike na-ahazi ị data site na-agbakwụnye artwork, ihichapụ oyiri music faịlụ. The interface nke software dị mfe, kensinammuo, na onwe-na-eduzi.
Ọ nwere ike na-enwe oké ọzọ maka iTunes.
Ọ bụ otu n'ime ndị free ọzọ ka iTunes jikwaa iphone, iPod, iPad na ọtụtụ ndị ọzọ. Ị nwere ike tinye music, videos, ngwa ọdịnala na ọtụtụ ndị ọzọ. The oké ihe banyere ya bụ na ọ na mbipụta faịlụ kama ihichapụ ẹdude oyiri dị ka iTunes. Otú ọ dị, software bụ nanị maka Windows na ọ bụghị n'ihi Mac version.
SynciOS bụ ihe ọzọ na ọzọ nke iTunes. Ọ na-enye niile mkpa atụmatụ na iTunes enye dị ka mmekọrịta music, videos, photos wdg Ọzọ uru nke-eji nke a software bụ na ọ na-atọghata faịlụ n'ime dakọtara format ka na-enyefe usoro. Otú ọ dị, ọ na-eme enweghị ike nyefee music ozugbo na iTunes n'ọbá akwụkwọ.
> Resource> iPhone> ụzọ ise banyere otú nyefee songs / music si iPhone ka iPhone